Xiddigiska - Saadaasha hawada ee shabakadda | Saadaasha Shabakadda
Cirku Waa mowduuc runtii aad u xiiso badan oo aan marnaba ka joogsan doonin inuu maalin kasta naga yaabsado. Waa cilmiga lagu barto xiddigaha, meerayaasha iyo guud ahaan koonkan guud ahaan. Isir ahaanshaheeda macnihiisu waa "Xiddigasho." Meydadkan samaawiga ah ayaa maalin kasta laga soo arkaa dhulka iyadoo ay ku xeel-dheer yihiin cilmi-baarayaasha cilmiga xiddigiska iyo saynisyahannada kuwaas oo doonaya in ay sharaxaad ka bixiyaan aasaaska koonka iyo howgalkiisa.
Waxaa jira habab badan oo indha indhayn ah oo lagu ogaanayo booska, halabuurka iyo dhaqdhaqaaqa meydadka cirka. Inta badan daraasadaha laqaado waxay diiradda saarayaan sida ay saameyn ugu yeelan karaan dhulkeenna.
Ilbaxnimooyinkii ugu da'da weynaa ayaa ku sharraxay cilmiga xiddigiska su'aalo kale oo la xiriira quraafaad, ilaahyo iyo caqiidooyin diimeed. Taas waxaa u sabab ahaa safarada dhaadheer ee la soo maray. Horumarinta tikniyoolajiyadda iyo aqoonta awgeed, waxaa la ogsoon yahay in Dhulku yahay mid kale oo samada ka mid ah oo aynaan ahayn bartamaha koonkan. Adduunku waa mid aan xad lahayn oo wuxuu ka kooban yahay galaxies, qorrax, xiddigo, meerayaal badan, dayax, meteorites, boodh, raadad, iyo xiddigood.
Telescope-ka waxaa ka qayb qaatay Galileo Waxay ahayd mid ka mid ah aaladaha waxtarka u leh cilmiga xiddigiska. Maanta, horumarka tikniyoolajiyadda, jawaabo cad ayaa laga bixin karaa asalka koonka iyo da'da meydadka cirka. Cirbixiyeennada ayaa ku darsaday macluumaad qiimo leh sayniska dhulkeenna oo ay sii wadaan adeegsiga isla habka kormeerka.
Guud ahaan waxay ka helaan dowladda dhaqaale, maal-gashigooda qaaliga ah waxaa maalgeliya hay'ado mas'uul ka ah soo-iibinta iyo ikhtiraaca aaladaha sii kordhaya iyo bixinta iyo qaabeynta xarumaha cilmi-baarista ee adag sida: NASA.
Qeybtaan waad ku raaxeysan kartaa oo ku baran kartaa guud ahaan caalamka iyo asalkiisa. Laga soo bilaabo shaqeynta nidaamka qorraxda, astaamaha dhammaan meerayaasha, iyadoo la marayo marinnada ugu muhiimsan ugana fogaanaya godadka madow. Ha moogaan sixirka Xiddigiska oo ku soo biir aqoonta durugsan!
by Jarmal Portillo samee Toddobaadyada 2 .
Jupiter waa meeraha ugu weyn dhammaan nidaamka qoraxda wuxuuna ka tirsan yahay kooxda meerayaasha gaaska. Waan ogahay…
Waa maxay sababta Pluto ma aha meeraha?
by Jarmal Portillo samee Toddobaadyada 3 .
Pluto, meeraha la ilaaway, hadda ma ahan meere. Nidaamkeena qoraxda waxa ahaan jiray sagaal meere ilaa...
waa maxay xiddig
by Jarmal Portillo samee Toddobaadyada 4 .
Marka aan ka hadalno cilmiga xiddigiska iyo hawada sare, fikradda xiddigiska ayaa had iyo jeer la adeegsadaa. Si kastaba ha ahaatee, dad badan ma...
Maxaa ku yaal bartamaha Jidka Caano
Waxaynu ognahay in Jidka Caano-guduhu yahay galaxyadayada iyo inuu yahay ururinta balaayiin…
Muxuu telescope u yahay?
by Jarmal Portillo samee 1 bishii .
Waa hal-abuur wax ka beddelay cilmiga xiddigiska iyo aqoonta caalamka. Si kastaba ha noqotee, dhammaan dadka…
by Jarmal Portillo samee Bilaha 2 .
Nidaamkeena qorraxdu, ama hab-dhiska meeraha sida sidoo kale loogu yeero, waxaa ka buuxa noocyo badan oo kala duwan oo jidheed oo samada ah,…
Sawirka godka madow ee galaxyadayada
Saddex sano ka hor, bulshada sayniska ee Event Horizon Telescope (EHT) ayaa adduunka kaga yaabisay sawirkii ugu horreeyay ee…
Sidee u dhawaaqaa godka madow?
Godka madow ee ku yaal bartamaha kooxda Perseus galaxy waxay la xiriirtay dhawaaq ilaa 2003…
Stephen Hawking, Yuri Milner iyo Mark Zuckerberg ayaa madax ka ah guddi maamul oo loogu talagalay hindise cusub oo lagu magacaabo Breakthrough Starshot, kaasoo...
waa maxay orbit
Marka aan ka hadlayno cilmiga xiddigiska, nidaamka qoraxda iyo meerayaasha, waxaan had iyo jeer ka hadalnaa wareegga. Si kastaba ha ahaatee, ma aha dhammaan…
waa maxay meeraha
Waxaynu ku noolnahay meere ku dhex jira hab-dhiska cadceedda, kaas oo ay ku hareeraysan yihiin dad kale...
Dhaqdhaqaaqa dhulka: wareegga, tarjumaadda, ka-hor-tagga iyo nafaqada
Aragtida Panspermia waa maxay asalka nolosha?
Aragtida Big Bang
Kalandarka dayaxa ee sanadka 2018